न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ८ बिहिबार | नारायण ढुङ्गाना (रासस)
काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या दैनिक बढ्दो छ । कतिपय युवा सीप सीकेर विदेश जाने गरेका भए पनि अधिकांश भने अदक्षमै विदेशिने गरेका छन् ।
आयोगले अहिले आप्रवासी कामदारको अवस्था अध्ययन गरिरहेको हो । सबैभन्दा बढी विदेश जाने १५ जिल्लमा अध्ययन भइरहेको छ । काम गरेर फर्किएकाहरू अहिले के गरिरहेका छन् ? सिकेका सीप प्रयोग भएको छ की छैन ?
उनीहरु काम गर्न जाँदा, गएपछि र फर्कदा के–कस्ता समस्या भोग्नुप¥यो, भन्ने नै अध्ययनको विषय हो । राज्यले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ? फर्किएपछिको अवस्थामा र त्यसपछि राज्यको सहयोग कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ ।
उनीहरुको समस्या र कमजोरीका साथै समाधान पनि के हुनसक्छ भन्नेबारेमा समेत एउटा निचोड निकालिने छ । अध्ययनमा पाँच हजार आप्रवासी कामदारलाई सहभागी गराइने छ । आएको प्रतिवेदन सुझाव स्वरुप सरकारलाई बुझाइने सदस्य पाठक बतउनुहुन्छ ।
अध्ययनका क्रममा आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग छलफल भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपालीले भोग्नु परेका समस्या न्यूनीकरण गर्न अध्ययनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेे आयोगको विश्वास छ ।
“राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सम्बन्धित विषयमा पूर्ण बनाएर पठाउनुपर्छ, तलब कम पाउनु, अर्कै काममा लगाउनुलगायत समस्या पूर्व जानकारी नहुनु र सीपको अभाव नै हो”, सदस्य पाठक भन्नुहुन्छ ।